Xiriirka ka dhaxeeya Al-Shabaab iyo Axmed Madoobe iyo CIIDANKA KENYA |
Xiriirka ka dhaxeeya Al-Shabaab iyo Axmed Madoobe iyo CIIDANKA KENYA
Super Tadarise buy online, clomid without prescription. Baarayaasha QM ee Xayiraadda Hubka ee dalalka Somalia iyo Eritrea ayaa shalay baahiyey Warbixin-sannadeedkooda ku aadan qaabka ay u hirgashay Xayiraadda hubka ee Somalia iyo Eritrea.
Warbixinta waxaa si qoto dheer looga hadlay Ganacsiga Suuqa Madow iyo Iskaashi-hoosaadka wada shaqeynta leh ee u dhexeeysa Alshabaab, Ciiddanka Kenya iyo Maamulka KMG ee Jubba ee Axmed Madoobe.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in ay Alshabaab dhuxul fara badan ka dhoofiyaan Dekedda Kismaayo oo ay Ciiddanka Kenya maamulaan, isla markaana ay Alshabaab dakhli badan ka heleen labadii sanno ee la soo dhaafay oo ay Milliteriga Kenya la wareegeen Kismaayo.
Warbixinta waxaa kaloo lagu xusay in bishii dekedda Kismaayo laga dhoofiyo in ka badan hal million oo jawaano lagu cabeeyey dhuxusha loo iib geeyo inta badan Waddamadda Gacanka Carbeed, iyadoo Alshabaab ka macaashtay lacag dhan ugu yaraan 250 million oo Dollars shixnaadaha dhuxusha ee loo iib geeyo Suuqyadda Caalamka muddadii u dhexeysay 2013-kii ilaa 2014-ka.
Waxaa laga yaabaa inuu macaashku intaas ka badnaan karo, iyadoo aysan Baarayaasha wada aqoonsanin Maraakiibta lagu daabulay shixnadaha dhuxusha.
Baarayaasha QM waxay xuseen inay warbixino la hubo ka soo xigteen ilo ku sugan Kismaayo iyo sawirro ay qaadeen Dayax-gacmeedyadda dhinaca Sirdoonka ee QM kala shaqeeya Arrimaha Somalia.
Wasrbixinta Baarayaasha QM ee Xayiraadda Hubka ee dalalka Somalia iyo Eritrea, waxaa kalo olagu xusay inay Alshabaab guddoonsadeen bilowgii sannadkan inay inta badan dhuxushooda laga dhoofiyo Dekedda Kismaayo, iyadoo maalin kasta Kismaayo gaaraan celcelis ahaan 20-gawaarida xamuulka, oo uu midkiiba wado 5 ilaa 12 tan oo dhuxul ah.
Warbixinta waxaa lagu sheegay inay Alshabaab, Ciiddanka Kenya iyo Maamulka KMG ee Axmed wada qeybsadaan Kharajka ka soo xerooda dhoofinta Dhuxusha, waxayna Alshabaab ka helaan 33%, Ciiddanka Kenya 33% iyo Maamulka KMG ee Axmed Madoobe 33%.
Warar kale ayaa sheegayo in ay Alshabaab 40% ka helaan saami-qeybsigaasi, halka ay Ciiddanka iyo Maamulka KMG ee Axmed Madoobe ka helaan min 20% sida lagu xusay Warbixintaas.